एक अनौठो तथ्य बाहिरियो : धेरै महिलासंग यौनसम्पर्क राख्ने पुरुषलाई क्यान्सर नहुने - Kantipath.com
यौनसम्पर्क नगरी ब्रम्हचर्य जीवन बिताउन खोज्नेलाई यो अध्ययनले चुनौती थपेको छ । बेलायतमा हरेक वर्ष झण्डै ४२ हजार प्रोस्टेट क्यान्सरका विरामी थपिएका छन् । जसमा ११ हजारको ज्यान जाने गरेको छ ।एजेन्सी
Previous Previous post: कुन-कुन दिन श्रीमान श्रीमती अलग भएर बस्नुपर्छ ? थाहा पाउनुहोस् !
Next Next post: के हो ऐठन ? कतै तपाईलाई यस्तो त भएको छैन ?